အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့၏ စတုတ္ထအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
by Thinmbadm1n / May 30, 2017 / comments
နေပြည်တော် မေလ ၃၀ရက်
အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့၏ စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အား ယနေ့နေ့လည် (၃) နာရီ အချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုခဲ့ရာ အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မောင်တောမြို့ ကျောက်ပန္ဒူကျေးရွာ၌ တန်ဖိုးနည်းနေအိမ် အလုံး ၁ဝဝ ပါဝင်သော ကျေးရွာသစ်အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်
by Thinmbadm1n / May 29, 2017 / comments
သတင်း- မောင်စိန်လွင်(မြန်မာ့အလင်း)၊ ဓာတ်ပုံ- မင်းထက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင် မောင်တောမြို့နယ် ကျောက်ပန္ဒူကျေးရွာတွင် တန်ဖိုးနည်းနေအိမ် အလုံး ၁ဝဝ ပါဝင်သော ကျေးရွာသစ်တစ်ရွာကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးရာဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / May 25, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေလ ၂၅ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးရာဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Miroslav Jenca သည် ယနေ့နံနက် (၁၁) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
by Thinmbadm1n / May 23, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေလ ၂၃ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long သည် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
နယ်စပ်ရေးရာရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုရံပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ ဆယ်မိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံပုံတလို့ရွာတွင်းလမ်း (၀/၃) မိုင် ကျောက်ချောလမ်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်ပ
by Thinmbadm1n / May 17, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေလ ၁၈ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
by Thinmbadm1n / May 16, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေလ ၁၆ ရက်
အငယ်တန်းစာရေးအောင်မြင်သူများ ၂၂-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီအရောက် သတင်းပို့ရပါမည်။
by Thinmbadm1n / May 15, 2017 / comments
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်နှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လမ်းတံတားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများ ကျင်းပပြီးစီး
by Thinmbadm1n / May 12, 2017 / comments
တောင်ကြီး ၊ မေလ ၁၂ ရက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဥရောပသမဂ္ဂမှ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ဖြစ်သူ H.E. Mr. Christos Stylianides နှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ မေလ ၁၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်အား ဥရောပသမဂ္ဂမှ Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management ဖြစ်သူ H.E. Mr. Christos Stylianides နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
by Thinmbadm1n / May 11, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေလ ၁၁ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လမ်းတံတားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြီးစီး
တောင်ကြီး၊ မေလ ၁၁ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ သောက်သုံးရေ လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်
နယ်စပ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနမှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း နွေရာသီရေရှားပါးသည့် ကျေးရွာများသို့ ဂါလံ(၂၀၀၀) ဆံ့ရေသယ်ယာဉ်ဖြင့် ရေလှူဒါန်းလျက်ရှိရာ ၅-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် နွေရာသီရေရှားပါးသည့် ကျေးရွာများဖြစ်သော ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ဇီးရိုင်းကျေးရွာအား ရေဂါလံ ၂၀၀၀၊ တောင်သာကျေးရွာအား ရေဂါလံ ၆၀၀၀၊ ၆-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပုပ္ဗသိရီမြို့နယ် ဖတ်တဲကုန်းကျေးရွာအား ရေဂါလံ ၂၀၀၀၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် ကျောင်းကုန်းကျေးရွာအား ရေဂါလံ ၂၀၀၀၊ ၇-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် လယ်ဝေးမြို့နယ် ရွာသစ်ကျေးရွာသို့ ရေဂါလံ ၂၀၀၀၊ စုစုပေါင်း ရေဂါလံ ၁၄၀၀၀ အား ရေလှူဒါန်းဖြန့်ဝေပြီး မိုးမကျကာလအထိ ရေရှာ
စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၆)၊ အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်နည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၁)၊ စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉၈)နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်း ပြုပြင်နည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းများဖွင့်ပွဲ
ရန်ကုန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်
၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ (၇၈၀)သန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
by Thinmbadm1n / May 06, 2017 / comments
၂၀၁၇၊ နေပြည်တော် မေ ၆ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်သန်းထွဋ်သည် မေ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးမြို့သို့ရောက်ရှိကာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၇၈၀)ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ပေါ် (၄)ရပ်ကွက် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
by Thinmbadm1n / May 05, 2017 / comments
ရန်ကုန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိ မဲပလဲ့-ကော့ကော်-ထိဝါကလေး နယ်စပ်ပတ်လမ်းကတ္တရာလမ်းသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်
by Thinmbadm1n / May 02, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ မေ လ ၂ ရက်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
by Thinmbadm1n / May 01, 2017 / comments
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၃၀ရက်